Transformers ရုပ်ရှင်ချစ်သူများအသည်းစွဲ Bumblebee သို့မဟုတ် Chevrolet Camaro 2017 မော်ဒယ်
Camaro ဆိုတာ . . .
အမေရိကန်အခြေစိုက် နာမည်ကျော် ကားကုမ္ပဏီ Chevrolet ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ မော်ဒယ်ပါ။ နာမည်ကြီး American Muscle ကားများထဲမှ လူကြိုက်များတဲ့ ကားအမျိုးအစားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ထည်ပိုင်းမာကျောမှုနဲ့ မောင်းနှင်ရတည်ငြိမ်မှုကို ဦးစားပေးဖန်တီးထားတာပါ။ ဒေသတွင်းပြိုင်ဖက်ဖြစ်တဲ့ Ford ရဲ့ Mustang မော်ဒယ်တွေနဲ့ ဈေးကွက် ပြိုင်ဆိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ဈေးကွက်ဝေစုအခိုင်အမာရယူထားနိုင်တဲ့အပြင် Transformer လို နာမည်ကြီး ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာပါ Bumblebee ဇာတ်ဆောင်အဖြစ်ထည့်သုံးလိုက်တာကြောင့် သတိထားမိသူများလာသလို ကြိုက်သူလည်း များလာခဲ့ပါတယ်။
Camaro ကို ၁၉၆၆ ခုနှစ်ကနေ စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ရာက ၂ဝဝ၂ ခုနှစ်မှာတော့ ထုတ်လုပ်မှု ရပ်နားခဲ့ပါတယ်။ အပြီးတိုင်ရပ်နားလိုက်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်မှာတော့ အရင်နဲ့မတူတဲ့ အဆင့်မြှင့်တင်မှုတွေနဲ့အတူ နှစ်ယောက်စီးအမိုးဖွင့်ကားဈေးကွက်ထဲကို တစ်ကျော့ပြန် ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ရောင်းချရမှု ပမာဏကိုကြည့်ရင်လည်း တစ်ကျော့ပြန်ထုတ်လုပ်လာတဲ့ ၂ဝ၁ဝ မော်ဒယ်ကနေ နောက်ဆုံးမော်ဒယ်ထိ တစ်နှစ်ကို ပျမ်းမျှ အစီးရေ ၈ သောင်းလောက်ထိအောင် ရောင်းချထားနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။
အခုနောက်ဆုံးထွက်ရှိလာတဲ့ ၂ဝ၁၇ မော်ဒယ်က အရင်မော်ဒယ်တွေထက် လက်ကိုင်ပိုင်း ပိုပြီး တည်ငြိမ်လာပါတယ်။ သိသာသွားစေတဲ့အချက်ကတော့ ပတ်လမ်းပေါ်မှာ မြန်နှုန်းမြင့်မောင်းနှင်နေရင်း ကွေ့တဲ့အချိန်ဆို ထိန်းချုပ်ရ ပိုပြီးတည်ငြိမ်လာပါတယ်။ ပြီးတော့ ဂငယ်ကွေ့လို လားရာပြောင်းပြီး မောင်းတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာလည်း ကောင်းမွန်မြန်ဆန်တာတွေ တွေ့လာရပါတယ်။
အင်ဂျင်စနစ်မှာဆိုရင်လည်း V6 နဲ့တင်မဟုတ်ပဲ V8 အင်ဂျင်စနစ်နဲ့ပါရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်စစ်ဆေးသူရဲ့ သုံးသပ်ချက်အရ အခုနှစ် Camaro ရဲ့ အင်ဂျင်စနစ်တွေက တန်းတူအင်ဂျင် အရွယ်အစားတွေထဲမှာ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မှု ပိုပြီးကောင်းလာတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီသုံးသပ်ချက်အရဆိုရင်တော့ တန်းတူ ပြိုင်ဖက်မော်ဒယ်တွေထဲမှာ အရှိန်မြှင့်တင်နိုင်မှု အကောင်းဆုံးမော်ဒယ် အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်မယ့် အလားအလာရှိနေပါတယ်။ ၂ ယောက်စီး အမိုးဖွင့်ကားတွေထဲမှာ ဈေးနှုန်းသင့်သလို အဆင့်ထပ်မြှင့်မယ်ဆိုရင်လည်း သုံးရင်သုံးနိုင်သလောက် အများအပြားရနိုင်သေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မော်ဒယ်ကို Sport ပိုဆန်အောင် အမိုးကိုနိမ့်လိုက်တာကြောင့် ပြတင်းပေါက်တွေက သေးသွားပါတယ်။ Sport ဆန်သွားပေမယ့် အလှစီးမော်ဒယ်ကို် ကြည့်လို့မလှစေသလိုဖြစ်သွားစေပါတယ်။ စီးနင်းရတာလည်း အနည်းငယ် စိတ်ကျဉ်းကျပ်စေသလိုဖြစ်စေပါတယ်။
အပြင်ကိုယ်ထည်အရောင်ကို ၁ဝ ရောင်ထိအောင်ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပေမယ့် အတွင်းခန်းကိုတော့ အဖြူ၊ အနက် ၂ မျိုးပဲ ရနိုင်ပါတယ်။
အင်ဂျင်စနစ်နဲ့စွမ်းဆောင်ရည် . . .
အင်ဂျင်အရွယ်ရွေးချယ်နိုင်မှု အများအပြားနဲ့ မိတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ၂.ဝ (turbo) လီတာသုံး ပုံမှန်လေးလုံးထိုးအင်ဂျင်ကနေ V6, V8 အင်ဂျင်တွေအထိပါ ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ၂.ဝ (turbo) အင်ဂျင်က အခြေခံလည်ပတ်အား တစ်မိနစ်ကို အပတ်ရေ ၃ဝဝဝ ရှိပါတယ်။ ရုန်းအား ၂၉၅ ပေါင်-ပေရှိပြီးတော့ မြင်းကောင်ရေ ၂၇၅ ကောင်အား စွမ်းအင်ထွက်ရှိမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဘီးယက်စနစ်နဲ့ ဖန်တီးထားပြီးတော့ Manual နဲ့ ဆိုရင် ၆ ချက်သုံးဂီယာစနစ်နဲ့ ရနိုင်သလို Auto နဲ့ ဆိုရင်တော့ ၈ ချက်ထိအောင် ဂီယာအချက်ရေများများ သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အမြန်နှုန်း မြှင့်တင်နိုင်မှုအပိုင်းမှာတော့ 2.0 ဖြစ်တာကြောင့် နည်းနည်း အားနည်းပါတယ်။ V6 အင်ဂျင်နဲ့မော်ဒယ်ဆိုရင်တော့ တစ်နာရီမိုင် ၆ဝ နှုန်းကို အရှိန်မြှင့်ဖို့ အချိန် ၅.၄စက္ကန့်ပဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှုန်းက အရွယ်တူအင်ဂျင်တပ်ထားတဲ့ ပြိုင်ဖက် Ford Mustang ထက်ရော Dodge Challenger ထက်ပါ ပိုပြီး မြန်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။
မော်ဒယ်ခွဲများ . . .
အမိုးအဖွင့်အပိတ်လုပ်နိုင်တဲ့ Convertible နဲ့ ရိုးရိုး Coupe ကိုယ်ထည် ၂ မျိုးမှာ LS, LT, SS နဲ့ ZL1 ဆိုပြီး မော်ဒယ်ခွဲ ၄ မျိုးစီထုတ်လုပ်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း ၈ မျိုးအထိ ရွေးချယ်နိုင်မှာပါ။ LT မော်ဒယ်ခွဲက Base မော်ဒယ်ဖြစ်ပြီး ၁၈လက်မအရွယ် ဘီးတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ စမ်းသပ်မောင်းနှင်ကြည့်တဲ့သူတွေကတော့ SS မော်ဒယ်ခွဲက မောင်းနှင်ရတာရော စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပါ အကြိုက်တွေ့မိတယ်လို့ သုံးသပ်ထားကြပါတယ်။ SS မော်ဒယ်ခွဲကိုတော့ ၂ဝ လက်မအရွယ် ဘီးတွေနဲ့ ဖွဲ့ထားပါတယ်။ အမြန်နှုန်းမြင့်တင်မယ်ဆိုရင်လည်း ၁ နာရီ မိုင် ၆ဝ နှုန်းကို အချိန် ၄.၂ စက္ကန့်ပဲကြာမှာဖြစ်ပါတယ်။
သုံးသပ်ချက် . . .
အစကတည်းက ကောင်းပြီးသားမော်ဒယ်ကို စွမ်းဆောင်ရည်ထပ်မြှင့်ပြီး ဖန်တီးမိတ်ဆက်လာတာကြောင့် အမြန်နှုန်းရော ဒီဇိုင်းရောက အလန်းစားပါ။ အရွယ်အနေတော် ၂ ယောက်စီးအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ ကိုယ်ထည်ကို Sport ဆန်ဆန် ချိုးဆစ်ထားတာကြောင့် လူငယ်တွေအကြိုက်တွေ့စေမယ့် မော်ဒယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်ထုတ် Camaro ကားဟာ မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့ မော်ဒယ်ခွဲအမျိုးအစား၊ အင်ဂျင်ပါဝါတို့အပေါ် မူတည်ပြီး သိန်း ၃ထောင်ဝန်းကျင်အထိ ကျသင့်နိုင်ပါတယ်။
Car Type: ကားအမျိုးအစား
တံခါး ၂ ပေါက် Convertible နှင့် Coupe
PRICES: ဈေးနှုန်း ( MSRP/ Manufacturer's Suggested Retail Prices )
Convertible LS, $31905
Convertible LT, $32600
Convertible SS, $42905
Convertible ZL1, $67140
Coupe LS, $ 25905
Coupe LS, $ 36905
Coupe LS, $ 61140
ENGINE TYPE: အင်ဂျင်အမျိုးအစား (SS Model)
Front-engine, Gas V8, 6.2L
Rear wheel drive(နောက်ဘီးယက်စနစ်) , 6-speed manual (Includes Active Rev Matching.)
Wheelbase (အောက်ဘီးထောက်ကြား ပမာဏ): 110.70 in
Length (ကားအလျား): 188.30 in
Width (ကားအကျယ်အဝန်း): 74.70 in
Height (ကားအမြင့်): 53.10 in
Front Head Room (ယာဉ်မောင်းခန်း အကျယ်): 38.50 in
Curb weight (ကားအလေးချိန်): 3685 lbs
ပျမ်းမျှမြို့တွင်း- ၁၆ မိုင်
ပျှမ်းမျှမြို့ပြင်- ၂၅ မိုင်
Chevrolet ရဲ့ Brand New ကားအသစ်များကို ကြည့်ရှုဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ CarsDB ရဲ့ Brand New Chevrolet Page မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
စီးတီးဘတ်စ်ကားတင်သွင်းရာတွင် seater ကွဲလွဲတင်သွင်းလာမှူများကို ဒဏ်ကြေး ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးမည်
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွန်ကြားမှူဦးစီးဌာန ကြော်ငြာချက်